Viagraerectiledysfunction - I-Xenical - yongeza ubunzima be-Weightloss
Ukunyanyiswa kukukhathazeka okukhulayo phakathi kwentsha e-US. Ngesiqhelo esilalayo sezambane zezityalo kunye nefuthe lokuzivocavoca ngokomzimba ngenxa yezinga eliphezulu lokuzenzekelayo, iingxaki zibonakala zikhula nje.
Kukho ubuchule obuninzi bokulahleka kwezinto ezikhoyo kwiimarike ukusukela kwisicwangciso sokutya kumathambo amancinci. Eyona nto iqhelekileyo isisifo sokulahlekelwa kweepilisi.
I-Xenical enye yonyango lonyango (ipilisi) elinceda kakhulu ukunyusa abantu abalahlekelwa yioli kunye nokuyigcina. Xa udla amanqatha aphukile kwizinto ezilula kakhulu ezenza lula ukugaya, ngelixa ukutya okuninzi okunamafutha kugcinwa emzimbeni xenical avis ngenxa yokufumana ubunzima.
I-Xenical isebenza kwindlela yakho yokugaya ukuvimba malunga nesinye kwisithathu seenqatha ekudleni okutyayo ekugayeni. Ii-enzymes kwisimo sakho sokugaya esibizwa ngokuthi i-Lipases sinceda ukuphula amafutha kunye nokuncedisa. Xa kuthathwa ngokutya, i-Xenical idibanisa kwi-Lipases kwaye iyabavimba ukuba iphule ezinye iinqatha ozidlile. Ngako-ke enye yesithathu yamanqatha oye wawadla ayiphumelelwanga kwaye idluliselwa emzimbeni wakho ngokusebenzisa ukuhamba kweembilini.
Njengaye ukulahlekelwa kwesinye isisindo se-Xenical sinokubangela iziphumo eziphambili zolu hlobo njengemfuno ekhulayo yokuvula amathambo, amathambo amanoni, ukukhutshwa kwamanzi. Ngokuqhelekileyo oku kuboniswa kwisigaba sokuqala xa usebenzisa i-Xenical kunye nokuthoba ngokusetyenziswa. Nangona akukho mqathango wokutya, kodwa ukutya ukutya okuncinci kunokukunceda ukukhawuleza inkqubo yokulahleka kwesisindo.
Ungadla iintlobo zamavithamini amaninzi xa usebenzisa i-Xenical. Oku kunceda njengoko i-Xenical iphazamisa ukuxutywa kwamavithamini amaninzi ukwenzela ukuba izongezo ezongezelelweyo zeivithamini zimele zikuncede kuphela. Kodwa, kubaluleke kakhulu ukuba uthethe ugqirha malunga neyeza ezahlukahlukeneyo okanye iimveliso zonyango ozidlayo ngaphambi kokuba uqale i-Xenical.
I-Xenical imele ithathwe emva kokutya kwakho kwaye inokuthathwa ifike kwi-iri iyure. Ukuba ukhohliwe ipilisi yakho sicela ucinge ngokuyidla ngokutya kwakho okulandelayo. Nangona kungekho miphumo emibi eye yadibana nayo kumcimbi wokugqithisa, kodwa kunconywa ukuba uyidle njengokuba umiselwe ngugqirha wakho.